Mayelana NATHI - Jiangsu Apex Solar Energy Technology Co., Ltd.
I-Jiangsu Apex Solar Energy Technology Co, Ltd.
I-Jiangsu Apex Solar Energy Technology Co, Ltd. ingumkhiqizi ochwepheshe futhi othumela izinto zangaphandle kwephaneli lelanga iminyaka engaphezu kwengu-10. Sigxile ekwakhiweni, ekukhiqizweni nasekuthengisweni kwamaseli elanga, amamojula we-photovoltaic nezinhlelo zelanga.
I-Apex Solar ine-R & D yobuchwepheshe kanye neqembu labaphathi, lilandela ngokuqinile amazinga wokuhlola wamazwe omhlaba we-TUV, CE, CEC, CQC, ISO9001, ISO14001. Ngasikhathi sinye, i-Apex Solar ingahlinzeka ngemikhiqizo eyenziwe ngezifiso neminyaka engu-12 yesiqinisekiso somkhiqizo neminyaka engu-25 iwaranti yamandla. Kuze kube manje, kufakwe amamojula aphezulu elanga afaka izinhlobo ze-monocrystalline kanye ne-polycrystalline ku-grid, off grid kanye nezinhlelo ze-hybrid emakethe yamazwe ase-Europe, Australia, Canada, South America, Africa, Middle East nase Asia. Sikholelwa ukuthi imikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nokulethwa okusheshayo kungaletha ukubambisana kwesikhathi eside. Ukwaneliseka kwamakhasimende kungamandla ethu okushayela inqubekela phambili eqhubekayo.
I-Apex Solar yethule imishini yokukhiqiza ezenzakalelayo esezingeni eliphakeme ukukhiqiza amaphaneli elanga asezingeni lawo wonke amakhasimende, ifektri eseVietnam inamandla angama-200MW ngonyaka, amandla wokukhiqiza amaShayina wamamojula we-PV afinyelele kuma-600MW ngonyaka, ingu-800MW umthamo wokukhiqiza wonyaka. Kukhona uhlelo oluphelele lwe-QC olucabanga ukuqala kuze kube sekugcineni. Zonke izinto zokusetshenziswa ezisetshenzisiwe zivela kubahlinzeki beTier 1, ziletha imikhiqizo yekhwalithi efanayo negama elithi abakhiqizi bemodyuli yelanga eChina ngentengo yokuncintisana.
Bangaphezu kuka-50 amazwe okuya kuwo
Onke amaphaneli elanga enziwa ngamaseli we-A grade, Zonke izinto zokusetshenziswa ezisetshenzisiwe zivela kubahlinzeki beTier 1
Ngaphezulu kwe-2GW yohlelo lokusebenza lokufakwa kwamamojula
Bangaphezu kuka 3GW mpahla umthamo